ဘုံရန်သူကို မျက်ခြေမပြတ်စေနဲ့ (ပြည်သူ့အသံ) - News @ M-Media
ဘုံရန်သူကို မျက်ခြေမပြတ်စေနဲ့ (ပြည်သူ့အသံ)
in ပြည်သူ့အသံ — August 4, 2014
ဇူလိုင် ၃၀ ၊ ၂၀၁၄
Cartoon Credit- ဟန်လေး
၁။ ၁၉၆၂ / ၁၉၈၈ မှာ ကျောင်းသားပြည်သူ ရဟန်းရှင်လူတွေကို မတရားသတ်ဖြတ်၊ ဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့တာ ဘယ်သူလဲ?
၂။ ဒီပဲယင်းခရီးစဉ်မှာ ဒေါ်စုနဲ့ မျိုးချစ်တွေကို အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ် ဆိုးဝါးတဲ့ လုပ်ရပ်ကို ဘယ်သူတွေ လုပ်ခဲ့တာလဲ?
၃။ ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်မှာ သံဃာတော်တွေကို သတ်ဖြတ်၊ ဖမ်းဆီးထောင်ချ ကျောင်းတိုက်တွေ ပိတ်ပစ်လိုက်တာ ဘယ်သူလဲ?
၄။ ၂၀၀၈ နာဂစ်ကြမ္မာဆိုးမှာ ပြည်သူတွေ သေကြေ၊ လူထုတွေငတ်ပြတ်နေတာကို စားနပ်ရိက္ခာပို့တာတောင် တားဆီးခဲ့ကြတာ ဘယ်သူလဲ?
၅။ ၂၀၀၈ နာဂစ်နဲ့အတူ လူထုတွေ ရေထဲမျောနေချိန်မှာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို ပွဲလန့်တုန်း ဖျာခင်းခဲ့တာ ဘယ်သူလဲ?
၆။ ၂၀၁၂ ကချင်မြေမှာ ကချင်တွေ သိန်းကျော်စစ်ပြေးဘ၀ကိုရောက် ဒုက္ခသည်အဖြစ်နဲ့ ဗိုက်မှောက်နေရတာ ဘယ်သူ့ကြောင့်လဲ?
၇။ လက်ပံတောင်းအရေး ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးကြတဲ့ သံဃာတွေကို မီးဗုံးနဲ့ ဖြိုခွင်းခဲ့တာ ဘယ်သူလဲ?
၈။ လယ်တီဆရာတော်သိမ်နဲ့ စေတီကို အကျိုးလိုလို့ ဖျက်ဆီး သမိုင်းပျောက်အောင် လုပ်ခဲ့ကြတာ ဘယ်သူလဲ?
၉။ ရခိုင်မှ အစ မန္တလေးအဆုံး အိမ်ကြက်ချင်း အိုးမဲသုတ် လူသတ်ပွဲနဲ့ မီးရှို့ပွဲကို ဇာတ်ထုတ်အသစ်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်သူဆိုတာ ဘယ်သူလဲ?
၁၀။ လယ်သမားတွေ လယ်မြေတွေပျောက် ၊ ကျူးကျော်တွေ ခြေသလုံး အိမ်တိုင်ဘ၀ရောက်အောင်လုပ်တာ ဘယ်သူလဲ?
၁၁။ မဟာ သန္တိသုခကျောင်းကို ၀င်စီး၊ သံဃာတွေကို ဖမ်းဆီး သာသနာကို အကြည်ညိုပျက် ညှိုးနွမ်းအောင် လုပ်ခဲ့တာ ဘယ်သူလဲ?
၁၂။ လူထုက ၄၃၆ ပြောင်းခိုင်း၊ ၅၆(ခ) ကိုအတည်ပြု ၊ PR စနစ်အသက်သွင်းနေတာ ဘယ်သူလဲ?
၁၃။ အရှေ့တံခါးက ဒိုးယိုပေါက် ၊ တရုတ်ကြီးက ဈေးချိုရောက် ဗမာတွေ ကျူးကျော်တဲ ဆောက်ရတာ ဘယ်သူ့ကြောင့်လဲ?
၁၄။ ခရိုနီတစ်စုချမ်းသာ၊ လူထုတွေဘ၀ပျောက်ကာ လူငယ်တွေ ပညာရေးမရှိ၊ ကလေးလုပ်သား တိုးပွါးလာတာ ဘယ်သူ့ကြောင့်ပါလဲ?